Tue, Jul 14, 2020 at 8:15am
कस्तो रहन्छ देशभर आजकाे मौसम? #आहा खबर# टिकटकको नक्कल गर्दै भारतले ल्यायाे चिङ्गारी एप #आहा खबर# कञ्चनपुरमा प्रहरीले चलाएकाे मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु #आहा खबर# भारतीय हस्तक्षेपले तराई डुब्याे: गृहमन्त्री थापा #आहा खबर# बाढीपहिरोले पु-याएको क्षतिप्रति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रद्वारा दुःख व्यक्त #आहा खबर# मास्क र स्यानिटाइजर बाड्दै भाेलिबाट विद्युतीय बस चल्दै, भाडादर पुरानै #आहा खबर# भगवान राम भारतका हुँदै होइनन्, अध्योध्या वीरगञ्जकाे ठोरीमै छ : प्रधानमन्त्री ओली #आहा खबर# ऐश्वर्यालाई कोरोना भएपछि पूर्व प्रेमीले ट्वीट गर्दै दिए स्वास्थ्यलाभको कामना #आहा खबर# प्रचण्ड-बाबुरामलाई गन्हायो पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्टको थोत्रो लुगा #आहा खबर# ओली नै ५ वर्ष सरकारमा रहे नेकपा सखाप हुन्छ : झलनाथ खनाल #आहा खबर# साेमबार मात्रै काठमाडौं उपत्यकामा थपिए ९ जना काेराेना संक्रमित #आहा खबर# देशभर बाढीपहिरोबाट ८० जनाको मृत्यु, ५१ बेपत्ता, ५० घाइते #आहा खबर# नेपालमा फेरी किन खुले भारतीय च्यानल ? #आहा खबर# एक महिनापछि बहुमतबाट पारित प्रदेश २ काे बजेट #आहा खबर# काठमाडाैं उपत्यकामा चल्न थाल्याे मयुर यातायात #आहा खबर#
कावासोतीमा एक उदाहरणीय कार्य, लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध चेतना फैलाउन यस्तो कार्यक्रम !
कावासोती, १६ मङ्सिर देशब्यापी रुपमा १६ दिने लैङ्गिक हिंसाबिरुद्धको अभियान चलिरहदा नवलपुरमा क्षेत्रमा पनि बिभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन भएका छन् । यसै अन्तर्गत नवलपुर क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाहरु हरियाली संस्था, वातावरण जनजागरण बिकासमञ्च र 'आउ युवा देश बनाओ' नामक संस्थाहरुको संयुक्त आयोजनामा कावासोती १० स्थित जनता मा. बि. मा अध्यनरत छात्राहरुलाई महिला हिंसा, किशोरी स्वास्थ्य, आत्मरक्षासंग सम्बन्धि सचेतना तथा किशोरीहरुको लागि सेनेटरी प्याड..
प्लाष्टिकको प्रयोग बन्द गर्न यस्तो अभियान, रारा तालबाट शुभारम्भ गर्ने योजना !
काठमाडौँ, १३ मङ्सिर प्लाष्टिक तथा प्लाष्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोगलाई बन्द गर्न यही मङ्सिर १६ गतेदेखि ‘हिमालदेखि तराईसम्म प्लाष्टिकरहित समाज निर्माण अभियान’ शुरु गरिने भएको छ । समुद्र सतहदेखि दुई हजार ९७२ मिटर उचाइमा रहेको राराबाट शुभारम्भ गरिने उक्त अभियानको संयोजन आर्ट समिट ट्राभल एण्ड टूर्स प्रालिले स्थानीय तहका प्रतिनिधिका साथै पर्यटन व्यवसायीको सहकार्य र समन्वयमा गर्ने भएको छ । हिमाली जिल्ला मुगुमा पर्ने..
तरकारी खेतीका कारण यी ४८ वर्षीय व्यक्तिको फेरियो जीवन, परिश्रम र सीपको प्रयोग त् यस्तो होस् !
गलेश्वर, १० मङ्सिर पहाडको खेतबारी । फोहोटा र कान्लाकान्ली मात्र धेरै । तीनै फोहोटा र कान्लाकान्लीलाई सम्याएर बनाएको गरामा दिनरात परिश्रम गरेर उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री गरी मासिक रु ६० हजार आम्दानी गर्नु सामान्य कुरा होइन । परिश्रम गर्ने हो र सीप हुने हो भने एउटै गराबाट पनि पर्याप्त आम्दानी गर्न सकिदो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण बनेका छन् म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२..
सडकदेखि टेलिभिजनसम्मको अथक र निरन्तर प्रयास पछिको वर्तमान जिन्दगी
चितवन, ५ मङ्सिर कुनै समय सडकका पेटीमा डेन्ड्राइटको गन्ध सुँघेर लठ्ठिरहने बालक यतिबेला रेडियो र टेलिभिजनबाट सर्वसाधारणलाई सकारात्मक सन्देश दिने काममा सहभागी छन् । करीब चार वर्षको उमेरमा सडकमा गएका सुरज कँडेल ‘किरण’ ६ वर्षदेखि भरतपुरस्थित कालिका एफएम र टेलिभिजनमा समाचार खोज्ने, बनाउने र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेजस्ता कार्यमा व्यस्त छन् । भरतपुरको बेलटाँडीमा बसोवास गर्दैगर्दा बाबुको देहावसान भयो । आमा अर्कैसँगै गइन्..
शिक्षक पेशा छाडेर तरकारीखेती, दिए गतिलो जवाफ - हाम्रा युवा कृषि व्यवसाय गर्न लाज मान्छन्
सुर्खेत, २ मङ्सिर लेकबेँसी नगरपालिका–६ बाघखोर सुर्खेतका किसान पूर्णप्रसाद शर्मा तरकारी बालीबाटै सन्तुष्ट छन् । ५६ वर्षीय शर्माले तरकारीखेतीमा हात हालेको आज २२ वर्ष भयो । यसमा उनलाई गर्व लागेको छ । विसं २०५३ मा उनि नेरा प्रावि रानागाउँ सुर्खेतमा शिक्षक थिए । पछि त्यो पेशालाई छाडेर उनि तरकारीखेती गर्न लागे । शुरुमा उनले काँक्रा फलाए र स्थानीय बजारमा लिएर रु पाँचदेखि..
आमा समूहको उदाहरणीय कार्य, देउसीभैलो खेलेर सङ्कलन गरेको रकम सामुदायिक काममा खर्च !
पोखरा, ३० कात्तिक नेपालीको दोस्रो ठूलो पर्व तिहारलाई यहाँका आमा समूहले परम्परागत संस्कृतिको संरक्षणका साथै भैलोदेउसी खेलेर आर्थिक सङ्कलन समेत गर्दै आएका छन् । पोखरा महानगरपालिका–१७ स्थित शुभकामना आमा समूहले यस वर्ष घरछिमेकमा देउसीभैलो खेलेर रु दुई लाख ३० हजार सङ्कलन गरेको अध्यक्ष बिचित्रा भुजेलले जानकारी दिईन् । सो समूहले विभिन्न चाडपर्व, छिमेकमा हुने शुभकार्यमा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर सङ्कलन गरेको रकमबाट हालसम्म..
महिला हिंसाबारे निःशुल्क हेल्पलाइन ‘११४५’ को प्रभावकारिता बढ्दो, १ बर्षमा ५० हजार फोन कल
काठमाडौँ, २९ कात्तिक राष्ट्रिय महिला आयोगले नेपालमा पहिलोपटक शुरु गरेको २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने निःशुल्क हेल्पलाइन सेवा ‘खबर गरौँ ११४५’ को प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ । हेल्पलाइन शुरु भएदेखि यो एक वर्षको अवधिमा करीब ५० हजार फोन आएको छ । २०७४ मङ्सिर २५ देखि सञ्चालनमा आएको सो हल्पलाइनमार्फत अहिलेसम्म एक हजार ८४ वटा महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन् ।..
विद्यालयको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि देउसीभैलोबाटै जुटाए विद्यार्थीद्वारा शिक्षकको तलब
गलेश्वर, २७ कात्तिक देउसीभैलोबाट सङ्कलित रकम वनभोजसहित रमाइला कार्यमा खर्च गरिँदै आएको बेला यहाँको एक विद्यालयका विद्यार्थीले भने सो रकम निजी स्रोतका शिक्षकको तलबका लागि जुटाएका छन् । रघुगङ्गा गाउँपालिका–८ कुइनेमङ्गलेस्थित रितुङ माविका विद्यार्थीले देउसीभैलो खेलेर रु ६ लाख ५० जुटाएका छन् । सो रकम विद्यार्थीले विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । आधारभूतदेखि माविस्तरसम्मका शिक्षकको तलब जुटाउन हम्मेहम्मे परेपछि विद्यार्थीले स्थानीयवासीको घरदैलोमै पुगेर..
अनलाइन रिटेल कम्पनी अलिबाबाका चेयरम्यान 'ज्याक मा'का सफलताका १० सुत्रहरु :
एजेन्सी, १२ कार्तिक अनलाइन रिटेल कम्पनी अलिबाबाका चेयरम्यान ‘ज्याक मा’ एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन् । उनले ‘वाण्डा ग्प’का रुवाङ्ग जियानलिनलाई पछि पारे । ब्लूमबर्गको इण्डेक्स अनुसार ज्याकको सम्पत्ति २३ बिलियन डलर पुगेको छ । आउनुहोस , उनका केही यस्ता भनाइबारे जानकारी दिँदैछौं । जसलाई फलो गरेर जो कोही पनि सफलताको शिखरमा पुग्न सक्छ । यहाँ ज्याक माका १० भनाईहरु उल्लेख गरिएको..
आज्ञाकारी हुनु किन आवश्यक ? आज्ञाकारिता सम्बन्धी केहि प्रसिद्द भनाईहरु :
काठमाडौँ, १७ असोज आज्ञाकारिता सबै गुणहरुको जननी हो । – सेन्ट अगन्स्टाइन शिशुहरुलाई पहिले अनुशासनको शिक्षा देऊ, त्यसपछि तिम्रो चाहनाजस्तै तिनीहरु बन्छन् । – फ्र्याङ्कलिन जो मानिस अरुको निर्देशनमा काम गर्छ, बेखुसी हुँदैन । बरु त्यो मान्छे बेखुसी हुन्छ जो आफ्नो इच्छाविरुद्ध केही काम गर्छ । – सेनेका तिनीहरुको काम उत्तर दिने हैन, तर्क गर्ने पनि हैन तर मात्र काम हो । गर या मर । – अल्फ्रेड..
क्रान्तिकारी गीतहरु गाएर दुनियाँलाई जगाउने विख्यात गायक बव् मार्लीका ६ उत्कृष्ट भनाइहरू:
काठमाडौँ, २० भदौ बव् मार्लीको जन्म ६ फेवररी १९४५ मा जमैकामा भएको थियो । बव् मार्ली विशुद्ध गायक मात्र थिएनन् । उनी गीतकार, संगीतकार, कुशल गितारवादकका साथै विचारक पनि थिए । उनी शव्दहरुमा परिवर्तनकारी चेतना भरेर गीत लेख्थे । उनको जीवनको सकृय कालखण्ड सन् १९६२ देखि १९८१ सम्मको अवधीलाई मानिन्छ । त्यसताका उनले अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्ध ‘बफेलो सोल्जर’ जस्ता क्रान्तिकारी गीतहरु..
जीवनको सार के हो ? सुन्दर जीवनको लागि मननीय प्रेरक भनाइहरु :
एजेन्सी, २८ साउन जीवनमा आउने अनेक घटनाहरुले गर्दा हामीले जीवनलाई परिस्थिति अनुरुप फरक फरक तरिकाले परिभाषित गर्छौं । त्यस्तै यहाँ जीवनसंग सम्बन्धित प्रसिद्ध केही मननीय भनाइहरु समावेश गरिएको छ : सधै आफ्ना आँखाहरुले ताराहरुलाई हेर र आफ्ना पैतालाले जमिनमा टेक । – थेओदोर रुजवेल्ट तिमीले आफ्नो जीवनलाई अरुले व्याख्या गर्न नदेऊ, आफैले तिमीलाई परिभाषित गर । – हार्वे फियरस्टेन तिम्रो मन्जुरी बिना कसैले पनि तिमीलाई कम्जोर सावित..
इमान्दार हुन किन आवश्यक छ ? ईमान्दारिता सम्बन्धि केही मननयोग्य भनाईहरु :
काठमाडौँ, ७ साउन समाजमा इमान्दार र बेइमान दुवै कीसिमका मानिस हुन्छन् । आफ्नो निजि स्वार्थका लागि मानिसले जघन्य अपराधसमेत गर्न पछि परेका छैनन् । चोरी, डकैती, छलकपड, भ्रष्टचार लगायतका प्रवित्तबाट अकुत सम्पति कमाएर मोजमस्ती गर्नेभन्दा इमान्दार मानिसहरुले नै अन्तिममा नैतिकता र महानताको लडाई जितेका उदाहरण कयौं पाइन्छन् । समाजलाई सहि दिशामा लाग्ने हो भने मान्छे इमान्दार हुनु आवश्यक छ । इमान्दारिता सम्बन्धी..
विश्व-संगीतको क्षेत्रमा सबभन्दा बढी नाम चलेका व्यक्ति 'मोजार्ट'को प्रेरणादायी जीवन यस्तो छ .....
एजेन्सी. २४ असार विश्व-संगीतको क्षेत्रमा सबभन्दा बढी नाम चलेका व्यक्तिमध्ये एक हुन्, वोल्फ़गांक आमडेयुस मोजार्ट । महानतम उपलब्धी हासिल गर्ने यीनी मात्र ३५ वर्ष जती यो संसारमा रहे । उनका पिता संगीतकार भएकाले संगीतको गुण उनले जन्मजात पाएको थिए । सानै उमेरमा उनले संगित साधना शुरू गरेका थिए । तर उनको संगीतको यात्रा त्यती सुगम थिएन । त्यसबेला धनको नाममा उनीसित कौडी थिएन..
महत्वपूर्ण र सफल जीवन जिउनका लागि महात्मा गान्धीका सुन्दर ७ भनाइहरू:
एजेन्सी, १२ असार मोहनदास करमचन्द गान्धी (महात्मा गान्धी) को जन्म २ अक्टोबर १८६९ तथा मृत्यु ३० जनवरी १९४८मा भएको हो । उनी भारत तथा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता हुन् । यिनी विश्वका महापुरूषहरू मध्ये एकमा गनिन्छन् । बेलायती सरकारको उपनिवेशका रूपमा रहेका दक्षिण अफ्रीकाको रङ्गभेद अन्त्य गर्न तथा भारतलाई स्वतन्त्र गराउन यिनको ठूलो योगदान रहेको छ । अहिंसावादी..
जानिराख्न पर्ने जीवनको केहि महत्वपूर्ण प्रेमिल भनाइहरू...
एजेन्सी, ७ असार १ संसारका लागि तिमी मात्र एक मान्छे हौ, तर मात्र एक मान्छेका लागि तिमी पुरै संसार हौ । - विल विल्सन २ जानिराख तिमीले जती प्रेम बाढ्छौ उतीनै प्रेम प्राप्त गर्दछौ । - अज्ञात ३ आफ्नो प्रेम त्यसका निम्ती खेर नफाल जसले यसको मूल्य बुझ्न सक्दैन । - विलियम शेक्सपियर ४ हामी सबै प्रेमका निम्ती जन्मेका हौ । यहि नै अस्तित्वको सिद्धान्त हो । -..
निडर तथा उदारवादी शासकका रुपमा परिचित नेपोलियन बोनापार्टका केहि विश्वचर्चित भनाइहरू :
एजेन्सी, १ असार नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रान्सेली सैनिक तथा राजनीतिक नेता थिए जसले पछिल्लो फ्रान्सेली क्रान्ति तथा यससँग सम्बन्धित युद्धका समयमा ख्याति कमाए । उनी नेपोलियन प्रथमको रूपमा सन् १८०४ देखि १८१४ सम्म तथा सन् १८१५ मा र फेरी दोस्रो पटक फ्रान्सको सम्राट भए । क्रान्तिकारी युद्ध तथा उनका समयमा भएका सबै युद्धमा उनले फ्रान्सलाई नेतृत्व गर्दै सम्पूर्ण युरोपलाई आफ्नो अधिनमा..
सन्त कविरका मननिय भनाईहरु, जसले जीवनको दृष्टिकोण बदल्न सक्छ
एजेन्सी, २३ जेठ सन्त कविर । जसलाई विद्रोही सन्त भनिन्छ । जतिबेला उनी जन्मिए, त्यसबेला धार्मिक पाखण्डको साम्राज्य फैलिएको थियो । त्यही पाखण्डहरुको उनले उछितो काडे । उनी भन्थे, ‘वो ही मोहम्मद, वो ही महादेव, ब्रम्हा आदमा कहिए, को हिन्दु, को तुरुक कहाए, एक जिमि पर रहिए ।’ आजभन्दा ६ सयबर्षअघि उनको जन्म भएको मानिन्छ । यद्यपी उनको जन्मलाई लिएर अनेकौ कथा..
आफ्नो बुबाको अपेक्षामा खरो उत्रिएका 'मुकेश अम्बानी' ! थाहा पाउनुहोस् उनको सफलताका १० सुत्रहरु :
एजेन्सी, १४ जेठ संसारमा सबै मानिसहरु धनी बन्न चाहन्छन् । तर केही व्यक्तिले मात्रै आफ्नो सपना पुरा गर्छन् । भारतका धनाढ्य मुकेश अम्बानी पनि त्यस्ता थोरै व्यक्तिमा पर्छन् । बाबुले कमाएको धनलाई उनले आफ्नो मेहिनत र लगनशिलताका कारण नयाँ उचाई दिए । सञ्चारमाध्यमबाट टाढै रहन रुचाउने अम्बानी भारतमा थुप्रै युवाहरुको प्रेरणाका स्रोत हुन् । यस्ता छन् उनका जिवनका सफलताका दश शुत्र १. मुकेश..
काठमाडौँ, बैशाख १४ ओशोलाई कसैले भगवान मान्छन् । कसैले महान् बिचारक मान्छन् । कसैले प्रेमको व्यख्याता । कसैले दार्शनिक । विख्यात धर्मगुरु एवं महान् दार्शनिक । ओशो अर्थात रजनिश । आखिर जे भनेपनि ओशो युगपुरुष हुन् । उनी धारप्रवाह जे बोल्थे, त्यो जीवन र जगतका निम्ति अमूल्य हुन्थ्यो । भलै उनले लामो जीवन बाँचेनन्, जति बाँचे सार्थक जीवन बाँचे । त्यसो त सर्वाधिक विवादित गुरुको रुपमा..
अब्राहम लिंकनको दश महत्वपूर्ण मननिय भनाइहरू, थाहा पाउनुहोस् संघर्षसंग नडराउने लिंकनको बारेमा !
काठमाडौं, बैशाख ७ अब्राहम लिंकनको जन्म १२ फेब्रुवरी,१८०९ तारिखका दिन भएको थियो । उनको मृत्यु सन् १८६५ मा १५ अप्रिलको दिन भएको थियो । उनि अमेरिकाका सोह्रौँ राष्ट्रपति थिए। उनले अमेरिकालाई गृहयुद्धको ठूलो संकट बाट पार लगाए। अमेरिकामा दास प्रथा अन्त गरेको श्रेय लिंकनलाई नै जान्छ। उनको जन्म अमेरिकाको ग्रामिण भेगको गरिब परिवारमा भएको थियो । शिकर्मी पेशा र सिकार गरेर उनका..
वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्स्टाइनका दश प्रेरक भनाईहरु, के के थिए त उनका योगदानहरु ?
काठमाडौँ, १६ चैत अल्वर्ट आइन्स्टाइन एक सैद्धान्तिक भैतिकवाद थिए । उनी सबैभन्दा बढी सापेक्षताको सिद्धान्त र द्रव्यमान-ऊर्जा समीकरण E = mc२ को लागि चिनिन्छन् । उनलाई सैद्धान्तिक भौतिकी, खास गरी प्रकाश-विद्युत प्रभावको खोजको लागि १९२१ मा नोबेल पुरस्कार प्रदान गरियो । आइन्स्टाइनले नोबेल पुरस्कार पाएको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिद्धान्तले प्रकाशको कण प्रकृतिलाई उजागर गरिदियो । र, यही तथ्यको बलमा क्वान्टम यान्त्रिकीको विकास भयो ।..
एप्पल कम्पनीका संस्थापक स्टीव जॉब्सको 'जीवनको मंत्र'
एप्पल कम्प्यूटर तथा पिक्सर एनीमेशन का सीईओ स्टीव जॉब्स ले सधै आफ्नो दिलको कुरा सुने र विश्वमा एक यस्तो सफलता हासिल गरे जुन धेरै मानिसले सपनामा मात्र पाउन सक्छन । स्टीवको आफ्नो जीवनको सत्यता एक साधारण मानिसलाई अगाडी बढ्न तथा सफलता चुम्नलाई एक जीवन मन्त्र रहेको छ जसलाई पढेर हरेक कोहिलाई आकाश छुने प्रेरणा जरुर दिन्छ । तत्कालिन एप्पल का सीईओ स्टीव जॉब्स 12..
म्याडम क्यूरीको सन्देश : ‘मानिसबारे कम जिज्ञासु बन्नु ।’
रेडियमको आविष्कारक म्याडम क्यूरी आफ्नो कर्मका कारण अहिलेसम्म पनि संसारभर उत्तिकै परिचित छिन् । सन् १८६७ मा पोल्याण्डमा जन्मिएकी उनले रेडियम र पोलोनियम पत्ता लगाएर विश्वजगतलाई नै गुन लगाएकी थिइन् । दुई वटा विधामा नोबेल पुरस्कार जितेकी उनको कुनैबेला निकै चर्चा हुने गर्दथ्यो । उनको प्रसिद्धी उत्कर्षमा पुगेका बेला एक जना पत्रकार उनीसँग अन्तर्वार्ता लिन गए । क्युरीले दिएको समयमा नै..
भोली कसले पो देख्या छ र !
भोली कसले पो देख्या छ र ! एउटा ठूलो शहरमा एकजना निकै धनी व्यापारी बस्थे । उनको सम्पत्तिको कुनै लेखाजोखा नै थिएन । आफ्नो अपार सम्पत्ति देख्दा उनलाई निकै खुसी लाग्थ्यो । तर, एक दिन आफ्नै कार्यालयको घुम्ने कुर्सीमाथि बसेर आफ्नो सम्पत्ति कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेबारे उनी सोचमग्न भए । त्यस्तैमा उनको दिमागमा एउटा अनौठो जुक्ति फु¥यो । उनले सोचे, ‘जीवनमा..
"विजयमाथीको शंका नै असफलता हो ।"
प्रसंग नेपोलियन वोनापार्टको हो । एकपटक उनले आफ्नो श्रेष्ठ सेनापतीलाई एक यस्तो युद्ध लड्न भन्दछन् जहाँ विपक्षि सेनाको संख्या तिन गुणा बढी थियो र सेनापती समक्षा उनीहरूको भन्दा तिन गुणा कम सैनिक थिए । युद्धको सुरूवात हुनुपुर्व सेनापती नेपोलियन समक्ष आएर भन्छ, 'जनरल, विपक्षी सेनाको संख्या हाम्रो भन्दा तीन गुणा बढी छ, हाम्रो तिन गुणा कम, थोरै सैनिकद्वारा युद्ध जित्न..
एडिसनको सफलताको कथा
थोमस एडिसनले बल्बको आविष्कार गरेका हुन् भन्ने त प्राय मानिसलाई थाहा भएकै कुरा हो, तर कति मेहनत पछी यस काममा सफल भए भन्ने कुरा कमैलाई मात्र थाहा होला । आउनुहोस् थाहा पाऔँ उनको संघर्षको बारेमा : थोमस अल्भा एडिसन ले बिजुली बाट बल्ने बल्ब बनाउँदै गर्दा ९९९ पटक असफल भए तर १००० औँ पटकमा उनि बल्ब बनाउन सफल भए । जब कोहि..
बुद्धले केहि दिन सकेनन्
एकदिन गौतम बुद्ध आफ्नो आश्रम छेउमा रहेको आँपको बोटको छहारीमा आराम गरिरहेका थिए। बोटमा लटरम्म आँप फलेका हुनाले केहि बच्चाहरु आँप झार्न भनेर बोटमा ढुंगा हान्न लागे। उनीहरुले आराम गरिरहेका बुद्धलाई देखेनन् । त्यस्तैमा एउटा ढुंगाले बुद्धको टाउकोमा लाग्यो। बुद्ध चिच्याएको आवाज सुनेर बच्चाहरु बुद्ध भएको ठाउँमा पुगे । आफ्नो कारणले एउटा बृद्ध मानिस रोहिरहेको उनीहरुले देखेपछी आत्मग्लानी भयो र..
गौतम बुद्धलाई भक्तको यस्तो जवाफ
गौतम बुद्धलाई भक्तको जवाफ : एकपटक कुरा हो, रातको समयमा गौतम बुद्धले प्रवचन दिइरहेका थिए । बुद्धको प्रवचन सुन्नका लागि त्यहाँ सयौँ मानिसहरु उपस्थित भएका थिए । स्वभाविकरुपमा मानिसहरूले बुद्धको प्रवचन ध्यानपूर्वक सुन्दै थिए । तर, श्रोताहरूको बीचमा बसेको एउटा भक्त भने मस्तसँग निदाइरहेका थिए । ति भक्त निदाएको जब महात्मा बुद्धले देखे, अनि बोलाएर सोधे, ‘वत्स के तिमी सुतिरहेका छौ ?’ बुद्धको प्रश्न..
अल्बर्ट आइन्स्टाइनको गुरुमन्त्र
अल्बर्ट आइन्स्टाइनको गुरुमन्त्र : एक पटक विश्वकै महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनसँग एक युवकले सोधेछन्, ‘सारा संसारमा तपाईको नाम चर्चित छ । सबै तपाईको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्छन् र तपाईलाई महान् भन्छन् । अब भन्नुस् – तपाईंजस्तै महान् बन्ने सूत्र के हो ?’ त्यसपछि आइन्स्टाइनले मुस्कुराउदै भने, ‘यसको एकमात्र सूत्र हो — लगन । जब म तिम्रो उमेरको थिए तब गणितदेखि निकै डराउथे ।..
Results 124: You are at page4of 5